नापीका सर्वेक्षक महतोको कहालीलाग्दो सम्पत्ति, छानविन होला ? | My News Nepal
नापीका सर्वेक्षक महतोको कहालीलाग्दो सम्पत्ति, छानविन होला ?
२०७३ भदौ २६ गते
काठमाडौं । नापी कार्यालय मनमैजुका सर्भेक्षकद्वय हरि तिवारी र रामप्रमोद महासेठ २०७२ मंसिरमा ७५ हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ परे । २०७३ साउनमा अर्का सर्भेक्षक कमलबहादुर खत्री पनि ३० हजार घुस लिएको अभियोगमा निलम्बनमा परेका छन् । उनीहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा दायरपछि निलम्बनमा परेका उनीहरु अहिले पनि नापी कार्यँलय मनमैजुमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न रहने गरेका छन् ।
नापी कार्यालय मनमैजुका सर्भेक्षक राजकुमार महतोलाई प्रयोग गर्दै उनीहरु नमिलेका फाइल मिलाउने, सरकारी सार्वजनिक जग्गाका फाइल र कित्ता लोप गराउने कार्यमा सरिक हुने गरेको गुनासो छ । सर्भेक्षक राजकुमार महतोका विरुद्ध पनि अख्तियारमा अकूत सम्पत्ति आर्जनमा कारबाहीका लागि उजुरी परेको छ ।
६ नम्बर नापी गोश्वारामा ५ बर्ष कार्यरत महतोले काठमाडौं उपत्यकाका थुप्रै सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकाुननी रुपमा ब्यक्तिका नापेको आरोप लागेको थियो । ६ नम्बर गोश्वाराबाट बढुवा हुनका लागि नापी विभागमा गए । बढुवा भएपछि २ बर्ष विभागमा बस्नुपर्नेमा उनी २ महिनामै घुस खुवाएर सर्वाधिक आकर्षक डिल्लीबजार नापी कार्यालयमा सरुवा भए । डिल्लीबजारमा १ बर्ष बसेपछि पुनस् मनमैजु नापी कार्यालयमा सरुवा भएका हुन् । मनमैजुमा पनि सरकारी सार्वजनिक जग्गा नापनक्सा गर्ने, बाटोघाटो, कित्ता लोप गर्दै घुस असुली गर्दैआएका छन् । मनमैजुमा सेवाग्राहीका नियमाअनुसारका कुनै पनि काम नगर्ने, बीचौलिया लेखन्दासमार्फत् घुस पाएपछि मात्र काम गर्ने गरेको गुनासो ब्यापक आए पनि कार्यालय प्रमुखले उनलाई कारबाही गर्न सकेका छैनन् ।
सेवाग्राही र लेखापढी ब्यवसायीलाई उनले सिधै मैले नापी विभागका महानिर्देशकलाई घुस दिनुपर्छ भन्दै घुस माग्ने गरेका छन् । एक लेखापढी ब्यवसायीका अनुसार महतोले हाकाहाकी महानिर्देशकसँग मेरो सिधा सम्बन्ध छ, उनलाई सहयोग गर्नुपर्छ, उनी र उनका मानिसलाई दारुपानी खुवाउनुपर्छ भन्दै घुस माग्ने गरेका छन् । महतोले जग्गा बढी भए पनि घुस, कम भए पनि घुस मागेर हैरान पार्ने गरेको गुनासो दसौं दिनदेखि धाइरहेका सेवाग्राहीले गरेका छन् ।
६ नम्बर नापी गोश्वारादेखि मनमैजु नापी कार्यालयसम्म सरकारी सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरी दर्जाले नासुस्तरका कर्मचारी महतोले आर्जन गरेको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने हो भने धनुषा जिल्ला विकास समितिका लेखापाल जिवनाथ चौधरीकै हाराहारीमा फेला पर्ने उनलाई चिन्नेहरु बताउँछन् । लेखापाल चौधरीको अरब भन्दा बढी सम्पत्ति अख्तियारको छानबिनका क्रममा फेला परेको थियो ।
विशेष अदालतमा मुद्दा चलेपछि निलम्बनमा परे पनि सर्भेक्षक तिवारी र खत्री नापी विभाग अन्तर्गतका सरुवामा ट्रेड युनियनको नेताकै रुपमा दबाब दिने गरेका छन् । निलम्बनमा परे पनि उनीहरु नापी कार्यालयका ट्रेड युनियन गतिविधिमा सक्रिय हुने गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियन संघका हरि तिवारी र बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति निकट कर्मचारी संगठनको नेताको रुपमा नापीका सरुवामा मोलमोलाई गर्न तल्लीन छन् ।